Madaxweynaha Jabuuti oo la kulmay Xoghayaha Guud ee Jaamacadda carabta – Radio Daljir
Madaxweynaha Jabuuti oo la kulmay Xoghayaha Guud ee Jaamacadda carabta
Febraayo 6, 2018 4:07 g 0
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xoghayaha Guud ee Jaamacadda carabta Ahmed Abul Qeyd, ayaa ka wada hadlay arrimaha mandiqada Carabta iyo sidii loo horumarin lahaa iskaashiga iyo wada jirka Umadda Carabeed ee Walaalaha ah iyo waliba xaalada Geeska Afrika.
Kulunakan dhex maray labada masu’uul oo ka dhacay magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar,wuxuu Madaxweynaha Jabuuti aad u soo dhaweeyay dadaalka uu Xoghayaha guud ee Jaamacadda ka geystay arrimaha wadamada Carabta iyo ka hortagga xadgudbyada ka dhanaka dadyowga carabta, degenaashaha iyo nabad ku wada noolaashaha dadyowga dalalka Carabta ee Walaalaha ah.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, wuxuu kaloo kulunkaasi ku muujiyay sida dalkiisu u daneynayo iskaashiga wadamada carabta aragtidiisa iyo istaraatijiuyada ku wajahan dagaalada ka socoda wadanka Yeman iyo sidii xal loogu heli lahaa soo afjarida dagaalkaasi sababay khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed intaba iyo waliba sugidda amniga Suudaanta koon-fureed iyo Soomaaliya intaba.
Dhanaka kale Xoghayaha guud ee Jaamacadda Carabta Ahmed Abul-qeyb ayaa isna kulunkaasi ka cadeeyay lagama maarmaanimada sii xoojinta xiriirka Jabuuti iyo Jaamacadda Caraabta,arrimaha falastiin iyo wadciga Yeman, wuxuuna intaa raaciyay in doorashada golaha sharci dejinta Jabuuti oo la filayo inay ka dhacdo 23 ka bisha febraayo ee Sanadkan,ay Jaammacadda carabta u diri doonto ergo goob jog ka noqota, iyadoo ka jawaabaysa codsi arrintaasi la xiriirta oo ay ka heshay Dowladda jabuuti.
Wafdi Kasocda UN-ka oo Gaaray Magaaladda Dhuusamareeb (Sawiro)
Jubbland oo soo bandhigay Ajaanib katirsan Alshabaab (Sawiro)
on Madaxweyne Kuxigeenkii hore ee Puntland Camey oo safiir loo magacaabayoWAAN ogolnahay DHAMAANTAYO allaha KUU salgo nin lagu seexdow haseexan